CPUT12 Archives - Vernac News
Sakhikhaya Dlala Scroll down for English Cape Town – Idyunivesithi I-CPUT ikhuphe ingxelo ngoMvulo ebonakalisa ukuzimisela kwaledyunivesithi ekuqesheni oonogada kunye nabacoci ababesaya kuqeshwa ziinkampani zabucala. Abasebenzi baseCPUT batyikitye izivumelwano zokuqala namhlanje emva kweengxoxo ezithathe iveki yonke ephelileyo. Oku kuza emva kokuba abafundi kunye nabasebenzi bakhokhelela ekuvalweni kwaledyunivesithi okwethutyana kwiveki ephelileyo. Eyona miba ibitshis’ ibunzi iquka: […]
Tagged CPUT Insourcing, CPUT12, Fees Must Fall	Read More
July 25, 2017 April 27, 2020 Vernac News
Sakhi Dlala | Editor Ekapa- Zinqunyanyisiwe iiklasi eCPUT (Bellville) emva kweengxoxo ezithathe imini yonke phakathi kwabaphathi beDyunevisithi nabasebenzi bencediswa ngabafundi. Eyona miba iphambili ebibekwe ngabafundi iquka ukuqeshwa kwabasebenzi yidyunivesithi ubuqu (insourcing) nokuchithwa kwamatyala abafundi abawafumana ngenxa yokuzibandakanya nephulo le-Fees Must Fall. Lengxoxo ibibanjelwe kwisakhiwo se-Administration, iquka abasebenzi beekhampasi ngeekhampasi. Emva kwemini yeengxoxo abaphathi bemana ukungavumi kwezi […]
Tagged #FeesMustFall, CPUT12, End OutSourcing	Read More